“အဲဒါငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “အဲဒါငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး´´
Posted by ခင်ခ on May 31, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Relationships & Family | 17 comments
နေရာက ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်ရဲ့ လ.၀.က ရုံးဌာနတစ်ခုမှာ စစ်တမ်းကောက်ယူနေကြတာပါ။
မန်နေဂျာရုံးခန်း တံခါးဝတွင် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးရပ်စောင့်နေပြီး ထိုအခန်းရှေ့တွင် ဤဒေသ အနီးတစ်ဝိုက်တွင် နေထိုင်ကြသော မြန်မာ ရခိုင် တရုတ် ဘင်္ဂါလီ …. စသည်လူမျိုးများ၏ အိမ်ထောင်ဦးစီးများ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စု ရှိနေကြပါသည်။ အဲဒီအချိန်မှာဘဲ တံခါးဝတွင်ရှိ ၀န်ထမ်းမှ
၀န်ထမ်း – ဦးလောရှည် ရှိပါလား
ဦးလောရှည် – ရှိပါတယ်၊
၀န်ထမ်း – အထဲဝင်ပါ ( ဆိုတဲ့အတွက် ဦးလောရှည် အထဲဝင်သွားပါတယ်၊ အထဲရောက်တော့ စားပွဲရှေ့က ထိုင်ခုံမှာထိုင်လိုက်ပြီး သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိ်ုင်မှာ လူကြီး ၃ ဦး ထိုင်နေပါတယ်)
လူကြီး – ခင်ဗျားဘာလူမျိုးလဲ
ဦးလောရှည် – တရုတ်ပါ
လူကြီး – အဖေ ကရော
ဦးလောရှည် – တရုတ်ပါဘဲ
လူကြီး – အမေ ကရော
လူကြီး – အိမ်ထောင်ရှိလား
ဦးလောရှည် – ရှိပါတယ်
လူကြီး – ကလေး ကောရှိလား
ဦးလောရှည် – ရှိပါတယ် ၄ ယောက်ပါ
လူကြီး – နောက်ထပ်ကော ကလေးထပ်ယူဖို့ အစီစဉ်ရှိသေးလား
ဦးလောရှည် – ရှိတာပေါ့၊ ၀ တို့ တရုတ်ပြည်မှာ အခုလို အများကြီးမွေးလို့ မရဘူး၊ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ထဲ လာနေပြီး ကလေးယူရတာလေ ဖြစ်နိုင်ရင် ၇ ယောက် ၈ ယောက်လောက် ၀ မိန်းမကို မွေးစေချင်တာလေ။
လူကြီး – မွေးပါဗျာ သဘောရှိမွေးဗျာ။ ပြန်လို့ရပါပြီ။
( ဦးလောရှည် အခန်းထဲမှထွက်သွားလေ၏)
၀န်ထမ်း – နောက်တစ်ယောက် ဦးသာထွန်း
ဦးသာထွန်း – ရှိပါတယ်။ ( ဆိုပြီး အခန်းထဲဝင်ကာ ခုံလေးမှာ ထိုင်လိုက်ပေါ့)
လူကြီး – ဘာလူမျိုးလဲ
ဦးသာထွန်း – ရခိုင်ပါ။
လူကြီး – မိဘတွေကရော ဘာလူမျိုးလဲ
ဦးသာထွန်း – အဖေရခိုင် အမေရခိုင်ပါ။
ဦးသာထွန်း – ရှိပါတယ်
လူကြီး – ကလေးရောရှိလား
ဦးသာထွန်း – ၂ ယောက်ရှိပါတယ်။
လူကြီး – နောက်ထပ် ကလေးထပ်ယူဖို့ရော အစီအစဉ်ရှိလား
ဦးသာထွန်း – အခုက သား ၂ ယောက်မို့ သမီးမိန်းကလေး ရအောင် နောက်တစ်ယောက်တော့ စမ်းယူမလို့ စိတ်းကူးတော့ရှိပါတယ်။
လူကြီး – အေးဗျာ ဦးသာထွန်း ဆန္ဒအတိုင်း သမီးမိန်းကလေးရပါစေဗျာ ဆက်ကြိုးစားပေါ့။ ရပါပြီ။
(ဦးသာထွန်း တစ်ယောက်အခန်းထဲက ထွက်သွားတော့)
၀န်ထမ်း – နောက်တစ်ယောက် ဦးအီစွတ်
ဦးအီစွတ် – ရှိပါတယ် ( ဆိုပြီး အခန်းထဲဝင် ခုံမှာထိုင်ပေါ့)
ဦးအီစွတ် – ဘင်္ဂါလီပါ
လူကြီး – မိဘတွေကရော
ဦးအီစွတ် – နှစ်ယောက်စလုံး ဘင်္ဂါလီပါဘဲ
လူကြီး – ဒီဒေသကို ဘယ်လိုရောက်လာသလဲ
ဦးအီစွတ် – ဆရာနေရာကို အရင်တာဝန်ယူရောက်လာတဲ့ လူကြီးဆီ ဘာလေးညာလေးပွဲစားကတဆင့် ပေးပြီး နေခွင့်ရတာပါ။
လူကြီး – ထားပါတော့၊ အဲဒါငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ အိမ်ထောင်ရှိလား
ဦးအီစွတ် – ရှိပါတယ်၊ ကလေးလည်း ၁ ယောက်ရှိပါတယ်၊
လူကြီး – နောက်ထပ် ကလေး ၁ ယောက်ဘဲယူရမယ်နော်၊ အဲဒီ ၁ ယောက်ယူလို့ အဖတ်တင်ရင် ထပ်ယူခွင့် မရှိဘူး။
ဦးအီစွတ် – အာပါးဆရားကြီးရယ် မလုပ်ပါနဲ့ ၄ ယောက်လောက်တော့ ရရင် ယူပါရစေ။
လူကြီး – မရဘူး ဒါသတ်မှတ်ချက်ဘဲ ကလေး ၂ ယောက်ထက် ပိုယူခွင့်မရှိဘူး။
ဦးအီစွတ် – ဆရာကြီးရယ် အခန်းဝမှာ အနော်ဝင်ဖို့စောင့်နေရင်းနဲ့ ကြားမိပါတယ် အနော်ရှေ့က အသားဖြူဖြူ ခပ်ချောချော တရုတ်ကြီးက ၄ ယောက်ရှိတာတောင် ထပ်မွေးလို့ရတယ်ပြောတာလေ၊ အနော်ကျတော့ ၂ ယောက် ဘဲလားဟင်
လူကြီး – ရှာမရှည်နဲ့ ၂ ယောက်ဘဲ ယူရမည်။ ဒါ ဒီဒေသရဲ့ ကန့်သတ်ချက်အမိန့်ဘဲ မလိုက်နာရင် အရေးယူ မယ်၊
ဦးအီစွတ် – ဒါဆို မောင်တောမှာ ကလေး ၂ ယောက် ရပြီး၊ ကျောက်ဖြူပြောင်းတော့ ဟိုမှာကော ထပ်ယူရင် ရလားဟင်
လူကြီး – အဲဒါငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး၊ အဲဒီရောက်မှ အဲဒီမှာရှင်း ဒါဘဲ၊ သွားလို့ရပြီ။
(ဦးအီစွတ်လည်း အခန်းထဲမှ ထွက်သွားလေသတည်း)
ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး ဟိုတွေးဒီတွေး ရယ်စရာလေး အဖြစ်ရေးတာပါ။
ဟုတ်ပ လေးခရေ… ကန်.သာ ကန်.သတ်တာ အဲလို ယူလဲ ရနေတာပဲကိုးနော်…
လေးခပြောမှ စဉ်းစားမိတယ်……….. ဟဟဟဟဟ ရီရတယ်ဗျို.
အဲလာဆို ကန့်သတ်နယ်မြေ များလေလေ….
တူး ချေးလဒန်း ပါ အေရီရာ မွေးလို့ရပြီ။
အဲလာ တမီးနဲ့ မဆိုင်ဘူးနော် ကိုကြီး ခ..
မိန်းမတြောက် ကလေး နြှောက်နှုန်းဆို
မိန်းမ ဘယ်နြှောက်မယူရဘူးလို့ မကန့်သတ်ဖူးဆိုတော့
အဲဒါ လေးခ နဲ့ ဆိုင်တာပေါ့ဗျာ
ခီညား ပေါဒါ ဘာဒုံး ..
ကျုပ် နားလည်ဝူး …
ဦးခင်ခ ကြီးမှာ ခီလေး နှီယောက် ချိနေဒါကို ပေါဒါရားဟင် ..
တွေး စရာ ရှိ်တာ ဆက်တွေးလိုက်ပါတယ် ။
ဟုတ်တယ် အဲလာ ငါနဲ့ မဆိုင်ဘူး ….။ လေးခ ကိစ္စ …။ သူ့ဖာသာသူ ရှင်းလိမ့်မယ် …………။ ဟီးးးးးးးး
နောက်ပိုင်း ငိုတောင် ငိုရမဲ့ကိစ္စပါ ကိုရင်ခရေ..
တဦးခြင်းစီထက် အများစု အမူအကျင့်နဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်… ဘင်္ဂါလီ အများစုက ခလေးစွတ် မွေးတော့ လူမြိုခံရမည့်ဘေး ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့ သဘောပါ.. အကယ်၍ အခြား လူမျိုးစုများမှာ အဲလို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် ဖြစ်နေရင် အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားအတွက် အန္တရယ်ရှိမယ်ဆိုရှု ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များမှ တားဆီးဟန့်တားကြမှာပါပဲ… ချမ်းသာပြီး ကိုယ့်နိုင်ငံသား မွေးဖွားနှုန်းကျတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာဆို လူဦးရေ အချိုးအစား မျှတဖို့ မူရင်းလူမျိုးစု အင်အား မချိနဲ့သွားဖို့ တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ လူမျိုးတူ အုပ်စုတူ သွေးတူတဲ့သူတွေကို အထဲခေါ်သွင်း နိုင်ငံသားပေးပါတယ်။ စင်ကာပူမှာဆို အဲလိုပဲ လုပ်တယ်။ ယူအက်စ်မှာ လူမဲ၊ စပန်းနစ်၊ လက်တင်နိုတွေ သိပ်များလာတော့ သူတိ့ ပါစင်းန်တေ့ခ်ျ ကျသွားအောင်၊ မူလ အဖြူတွေ ပါစင်းတေ့ခ်ျ တည်မြဲအောင် အေးရှန်းလို၊ အရှေ့ဥရောပက ကော့ကေးရှန်း အနွယ်ဝင်တွေ ခေါ်သွင်းပါတယ်..။ မြန်မာပြည်မှာကြတော့ ဘင်္ဂါလီကလွဲရင် ဘယ်သူမှ ငမ်းငမ်းတက် လာချင်ဘူး.. နယ်စပ်က တရုတ်တွေတော့ ရှိတယ်.. သူတို့က တရုတ်ဆိပ်ကမ်း စီးပွားရေးဇုံမြို့တွေမှာ တိုးဖို့မလွယ်လို့ ပေါချောင်ကောင်း ငယ်နိုင် မြန်မာပြည်ကို ဝင်ကြတာ…။
ဒီ -ု လားတွေ ကူလီကူမာ တယ်များသကိုး …
ယုံကြည်လေးစားလိုက်နာရမဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေ သာတည်ဆောက်နိုင်ရင် အဲဒီအရေးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကို လူသားတိုင်းလိုလားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှန်ကန်တဲ့ကာကွယ်မှုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အထိန်းအချုပ်မဲ့ လူသတ် မီးရှိ့လုပ်ရပ်တွေဟာ သိပ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမလုံခြုံမှုကိုခံစားရစေပါတယ်။ ယုံကြည်လေးစားလိုက်နာရမဲ့ဥပဒေကို ကျမတို့နိုင်ငံသားတိုင်းမျော်လင့် ပြီး လိုက်နာကြသင့်ပါတယ်။
ဥပဒေကရှိပြီးသား(စာအုပ်ထဲမှာ)၊တာဝန်ရှိသူတွေ ဥပဒေအတိုင်း မလုပ်ဘဲ ကိုယ်ကျိုးရှာလုိ့ ဒီအခြေအနေထိရောက် ရတာ
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က.. မြန်မာပြည်မှာ..အလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်သမားရှားတော့.. အိန္ဒိယသားတွေခေါ်သွင်းခဲ့ဖူးတယ်..
အဲဒီတုန်းက.. ရန်ကုန်ဆို.. ကုလားပြည်ကမြို့နဲ့တူနေပြီး.. မြန်မာစကားတောင်အလုပ်မဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာ…
အခုလို အနာဂါတ်တိုင်းပြည်အတွက်.. လုပ်အားရှင်များမြန်မာ့မြေမှာမွေးပေးတာ.. ကျေးဇူးတင်ကြောင်း…
လူမျိုးပြန့်ပွားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် …. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် … (ကိုယ့်အထင်တော့) တိရိစ္ဆာန်စိတ် မသိမသာ ပါလာတာဖြစ်မယ် … ခိခိ….ဖြစ်နိုင်လျှင် တစ်ခါ သားကျလျှင်… အပြုံလိုက်မွေးချင်တာကိုး …
မောင်တောကနေကျောက်ဖြူပြောင်းစရာမလိုပါဘူး ကိုခင်ခရေ။ မိန်းမထပ်ပြောင်းလိုက်ရင်ရပါဘီ။ မိန်းမ တယောက်ကလေးနှစ်ယောက်နှုန်းပေါ့။ အဲလိုလေးတွေရှိနေတယ်။ တူဒို့ဂ။